Xhosa | Boxing Products Supplier
Imveliso yebhokisi Umthengisi ngumvelisi kunye noMthengisi weZiko leMpahla yeeBhokisi, iiGlove zeBhokisi, ii-Hand Wraps, izixhobo zoLwazi lokuLwa, i-Rash Guard, i-MMA Shorts, i-Karate Mitts, i-Equipments Fitness, i-MMA Equipment, njl njl. unyaka wobulungu be-alibaba yegolide. Uluhlu lomgca wethu wemveliso, umgangatho omhle, kunye namanani okukhuphisana asenze enye yeenkampani ezinokuthenjelwa zaso e-Pakistan. Yonke into eyenzekayo ngenxa yeqela lobugcisa lisebenza kuwo onke amasebe kwi-Boxing Products Supplier kwaye yingako sinobudlelwano obusondeleyo nabathengi bethu bangaphandle kwihlabathi ukuze baqonde kwaye bazalise iimfuno zabo / iimfuno zabo nawuphi na umhla na nanini na ixesha.
I-Boxing Products Umthengisi uhlala esamkelekile ukwenza izinto ezikhethiweyo zemveliso, izinto eziphathekayo kunye naluphi na uphawu olufunekayo okanye igama lomtshina. Siyakwamkela nabathengi / abathumeli abanqwenela ukuvelisa inkcazo zabo / iinkqubo zabo zeemveliso ezahlukeneyo ezivela kuthi.
Izinto ezisetyenziselwa umveliso ngowona mgangatho ogqithiseleyo ngokwemfuneko yabathengi, kwaye ezi zinto zithengisa kakuhle, umqeshwa wethu Umkhumbi uphezulu olawulwa phantsi kolawulo oluqinileyo kuzo zonke izigaba zomveliso. Sigxininisa ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nokuhlelwe kwezicwangciso zokuthunyelwa ukukhusela nayiphi na indlela yokulibaziseka kwinkqubo yokuthumela.
Imizila yethu emine yemveliso enzulu iyanzulu ngokubhekiselele kubo enokubonwa lula ngokusebenzisa ikhathalogu yethu ye-intanethi.
Izixhobo zebhokisi: - Iiglovu zebhokisi, iiglovu zegag, i-Bag Mitts, i-Punching Mitts, i-Mitts Focus, i-Punch Bags, i-Balls Balls, i-Head Guards, i-Chest Guards, i-Groin Guards, i-Boxing, i-Boxing Shorts, i-Shinards kunye ne-Muay Thai Shorts.
Isixhobo seMMA: - Ulwahlulo lwezokulwa kweMidlalo, i-Rash Guard kunye neTank Tops, i-MMA Shorts, i-Kick Boxing Trousers, i-MMA yokukhupha iiglovu, i-Thai Pads, i-Vale Tudo Shorts, i-Kick Shields, i-Karate Mitts, i-Bellet ze-Karate, i-MMA Spats kunye ne-Protections.
UkuPhelela ukuGqoka: - I-Yoga leggings, iikhati zoxinzelelo, ibrabhu yezemidlalo, i-singlet, i-sleeves.
Izesebe: - Iintambo ze-Jump, i-Wall guards, i-Hand wraps, iibhande zobugcisa bokulwa, ukukhuselwa kwe-martial and keychains.
Ukuba unemibuzo malunga nomgca wemveliso yangoku okanye unemveliso emitsha ongathanda ukuyihlakulela, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Ukunikezelwa ngethuba esiza kuzama okusemandleni ethu ukufumana ibhizinisi lakho ..
Ngolwazi olungakumbi nceda uvakashele iwebhusayithi yethu http://www.boxing-products.com